အိုလံပစ်မီးတောက်ကို ပေကျင်းမြို့၌ ကြိုဆို ၊ မီးတိုင်သယ်ဆောင်ရေး စတင်ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ဂရိနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း ရှေ့ခေတ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရာ အိုလံပီယာမြို့၌ ထွန်းညှိထားသော အိုလံပစ်မီးတောက်သည် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပေကျင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းအိုလံပစ်တာဝါတိုင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် အမှာစကားပြောကြားနေသော ပေကျင်းမြို့ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပေကျင်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ(BOCOG) အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဌ Zhang Jiandong အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းအိုလံပစ်တာဝါတိုင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် မီးထွန်းညှိထားသည့် ဆီမီးခွက်အားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းအိုလံပစ်တာဝါတိုင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အိုလံပစ်ဆောင်းရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် မီးတိုင်သယ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဆီးမီးတိုင်အား ကိုင်ဆောင်ထားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာသော အိုလစ်ပစ်မီးအိမ်အား ၂၀၂၂ ပေကျင်းအိုလံပစ်ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဌ နှင့် အထူးကိုယ်စားလှယ် Yu Zaiqing က လက်ကမ်းသယ်ဆောင်စဉ်(ဆင်ဟွာ)
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ပေကျင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာသော အိုလစ်ပစ်မီးအိမ်အား ကြိုဆိုသယ်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များက ထွန်းညှိစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အဆိုပါ အိုလံပစ်မီးတောက်ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပေကျင်းအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ၏ အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့် အိုလံပစ်တာဝါတိုင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပေကျင်း ၂၀၂၂ အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီ (BOCOG) ဥက္ကဌ နှင့် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ(CPC) ပေကျင်းမြို့တော်မြူနီစပယ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး Cai Qi က မီးတောက်အားလက်ခံရယူခြင်း နှင့် ဆီမီးခွက်ထဲမီးထွန်းညှိခြင်းမပြုမီ အခမ်းအနားတွင် ဂရိနိုင်ငံ၌ ဆီးမီးထွန်းညှိခြင်း နှင့် အိုလံပစ်မီးတောက် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, Oct. 20 (Xinhua) — The Olympic flame, ignited for the Beijing 2022 Olympic Winter Games in Ancient Olympia in western Greece, arrived in Beijing on Wednesday morning.
(1/5)Special Representative and Vice-President of Beijing 2022 Yu Zaiqing carries the flame lantern as the Beijing 2022 Olympic flame arrived at Capital International Airport in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Zhang Chenlin)
(2) Zhang Jiandong, vice mayor of Beijing and executive vice president of the Beijing 2022 Organizing Committee (BOCOG), deliversaspeech during the welcoming ceremony for the flame of Olympic Winter Games at the Olympic Tower in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Zhang Chenlin)
(3) Photo taken on Oct. 20, 2021 shows the cauldron during the welcoming ceremony for the flame of Olympic Winter Games at the Olympic Tower in Beijing, capital of China. (Xinhua/Zhang Chenlin)
(4) Staff members display the flame lantern, torch and fire rod during the welcoming ceremony for the flame of Olympic Winter Games at the Olympic Tower in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Zhang Chenlin)
(6)Staff members light the flame lantern as the Beijing 2022 Olympic flame arrived at Capital International Airport in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Zhang Chenlin)■